Magweta Limited & Makambani Inc. Mitemo uye Maitiro
MuChibvumirano ichi ("Chibvumirano") "iwe" uye "wako" anoreva mutengi wega wega, "isu," isu," "wedu," "LL," uye "kambani" zvinoreva Lawyers Limited (iyo inotarisira mazita emhando. Makambani Akapindirwa, Varongedzeri Vezvidziviriro, Kambani yeOffshore, pamwe nemamwe mabhii uye mawebhusaiti), makontrakta ayo, vamiririri, vashandi, maofficial, madhairekitori uye vanobatana uye "masevhisi" zvinoreva mabasa anopiwa nesu. Ichi Chibvumirano chinotsanangura zvatinosungirwa kwauri uye zvaunosungirwa kwatiri sezvo zvine chekuita neMasevhisi. Nekushandisa maSevhisi pasi pechibvumirano ichi, unobvuma kuti iwe waverenga uye unobvuma kusungwa nemitemo yese nemamiriro echibvumirano ichi uye chero nemirau inoenderana kana marongero ari kana anogona kutsikiswa nesu. Iwe unobvuma kuti iwe uri pamusoro pemakore gumi nemasere ekuberekwa, kana kuti wakambosvika zera rehuwandu mukutonga kwako.
Zvichienderana nechibvumirano ichi, LL ichaita yekutanga, isingasunge kutsvaga kutsvaga zita kuti uone kana zita rekambani rawasarudza ratove richishandiswa neimwe kambani mudunhu rawasarudza, dunhu kana nyika. (Kambani, yakashomeka dhizaina kambani, uye / kana yakafanana masangano mhando anoshandiswa achichinjika pano pazvinoshanda.) Kana zita rako rakasarudzwa remubatanidzwa risingawanikwe, LL inozo (nenzira yeinodiwa yakanyorwa newe muchikumbiro chako) tsvaga imwe kambani mazita awapa kusvikira mhinduro dzekutsvaga dzaburitsa zita rekambani rinowanikwa. Muchiitiko chekuti iwe ukasasanganisira iyo chaiyo yemubatanidzwa dhizaini (kureva, "Inc.," "Corp.," kana "Corporation") LL ichawedzera iyo "Inc." (kana "LLC" yemakambani anezvikwereti zvishoma) chinokwana pakunyorera nenyika yako yakasarudzwa, dunhu kana nyika.
Unobvuma kuti ndiwe unobata chiperengo chezita remakambani (iwe) rawakapa. Unobvuma kuti wakatarisisa kaviri kuti mazita emakambani ari pano anopereterwa chaizvo sezvaunoda. Iwe unonzwisisa kuti ichi chikumbiro hachidzorerwe mushure mekutumira chikumbiro chako.
Kunyange isu tichiedza zvese kuti tiwane ruzivo rwechangobva kuitika, hatigone kuvimbisa kuti ruzivo rwechizvino-zvino pamusoro pekuwanikwa kwezita rekambani tinopihwa isu. Saizvozvo, isu hatipe vimbiso yekuti zita rinowanikwa kuti rishandiswe sezita rekambani mudunhu rako, dunhu kana nyika. LL haina mutoro munzira ipi neipi yekuvimba nekuwanikwa kwezita rekambani. Zvakare, tinokurudzira kuti usaprinte tsamba dzemakadhi, makadhi ebhizinesi kana kuita chero mari muzita kusvikira iwe wagamuchira hurumende yekusimbisa kuti zita rakatenderwa uye kambani yakaiswa.
Kana zita rako rekambani uye dzimwe nzira dzisipo uye ukasapa dzimwe nzira mukunyora pazuva reodha yako, unobvumidza LL kuwedzera mazwi ekuti "Enterprises," "Holdings," "Management," "Ventures," kana kuti “Guta guru” kusvika panoperera zita. Kana iwe usingape zita rekambani kuLL mukati meawa makumi maviri nemana ekuraira kwako unobvumidza LL kuti ikusarudzire zita.
Hatigone uye hationgorore kuti tione kana zita rekambani raunosarudza, kana mashandisiro aunoita iro zita rekambani, rinokanganisa kodzero dzepamutemo dzevamwe. Tinokukurudzira kuti uongorore kuti uone kana zita rekambani raunosarudza kana mashandisirwo aro rinotyora kodzero dzepamutemo dzevamwe, uye kunyanya tinokurudzira kuti utsvage mazano kune vanokwanisa kuraira vane mvumo yekuita mutemo mudanho rinoshanda.
DZIDZA uye Kiredhiti
Ndokumbira uchengete mupfungwa, kuti LL inoshandisa yakakosha nguva uye mari kuzadzisa maodha. Isu tinowanzo gadzira maodha nekukasira. Saka, mari yakabhadharwa kuLL uye mari LL yakatobhadharwa kuhurumende kuti inyore, kune vanobatana, vatengesi kana vamwe mari yekuzadzisa kurongeka kwako haidzoserwe, kusanganisira, asi isina kuganhurirwa, mari yekugadzirisa kadhi rechikwereti.
Kamwe kambani kana gwaro kana odha yatumirwa kuhurumende kana mumiririri yekunyorera pachinzvimbo chemutengi kana chivimbo kana rimwe gwaro ranyorwa odha haigone kudzoserwa kana kukanzurwa.
Mari inosvika madhora makumi manomwe neshanu ichawedzerwa kumacheke ese akadzoserwa kuLL nekuda kwemari isina kukwana kana maakaundi akavharwa. Uye zvakare, mubhadharo webhangi rebasa uchabhadhariswa pane cheki idzi.
Uye zvakare, nepo LL ichizoedza kuyedza kugadzirisa vatengi vedu, kukanganisa kwemunhu kana kukanganisa kwevanhu kunogona kuitika. Nekudaro, kana paine chero chikonzero chako chekupinza chikumbiro, chikumbiro chekuumbwa kwe LLC, chikumbiro chekuvimba, chiratidzo chekutengesa kana chikumbiro chekugadzirira chikumbiro chikumbiro kana chimwe chikumbiro chakanonoka zvisina tsarukano, kuparadzwa, kuiswa zvisirizvo, kana neimwe nzira kushayikwa, LL HAIZOZVIMBIRWE NEZVINO ZVINOFANIRA, ZVINOKOSHA, KANA KUKONZESA KUKWANISA. YAKO YEMAHARA REMEDI NE LL ICHAVE CHETE CHETE CHAKANAKA CHENYU NEZVO ZVESE ZVEMAHARA ZVINOBHADHADZWA KWAZVO KWAZVEDU MABASA SEZVABvumiranwa PASI PEMAZVI MAZWI NEZVINHU.
Muchiitiko chekuti hurongwa hwekumhanyisa hwaiswa, isu tichaita nhamburiko dzese kupedzisa mafayipi emakambani zvichienderana nechikumbiro chako. Nekuti LL inoita zvese zvainogona kuti ive nechokwadi chekuzara uye kukwana kwehukama hwako kufaira, isu hatipe vimbiso yekuti odha ichaiswa panguva yawakumbira. Kana zvikaitika kuti yako yekumhanyisa odhira isina kuiswa panguva, mushonga wako wega unozogumira kudzoserwa kwemamwe mabhadharo akabhadharwa kukurumidza kufaira.
Kana iwe wakabhadhara kuburikidza cheki nefeksi, cheki nefoni, cheki neInternet, ACH kana imwe nzira yakafanana, pachave nekubata kunoiswa pane yako odha kusvikira bhangi redu raratidza kuti kubhadhara kwako kwabviswa. Iyo chaiyo nguva ndeye matatu kusvika mashanu mazuva ebhizinesi, kusasanganisira kupera kwevhiki kana zororo rebhangi. Ino nguva inoenderana nebhangi uye kwete LL. Chete mushure mekunge tagamuchira kusimbiswa kuti mari dzajekeswa ndipo patinotanga kugadzirisa odha yako.
LL inoenda mukuedza kukuru kutaurirana nevatengi. Zvisinei, meseji dzerunhare, maemail kana dzimwe nzira dzekutaurirana dzinogona kusatambira mhinduro zana muzana muzana yenguva.
Odha inoiswa panguva yainotumirwa kuLL kuburikidza neInternet, runhare, fakisi kana tsamba. Kugadziriswa hakugone kuitwa kune yako odha mushure mekutumira kunze kwekunge wapihwa mvumo neLL. Kutevera kutambirwa kwemvumo yekutanga, gadziriso yeodha inoshanda chete mushure mekunge LL yagamuchira yakasainwa, yakanyorwa chikumbiro kubva kwauri kuburikidza nefacsimile. Kune mari uye nguva yekushandisa kuzadzisa kuraira. Naizvozvo, chero zvikumbiro zvekukanzura zvinofanirwa kuendeswa uye kugamuchirwa nesu neregisiti yakanyoreswa yekudzorera yakakumbirwa kana pane yedu fomu rekuonana pa https://lawyerslimited.com/ maawa makumi maviri nemana ebhizinesi tisati tatumira odha yako kubazi rehurumende kuti inyore kana basa risati raitwa. akapa. Maawa ebhizinesi mazhinji mukati mevhiki i24:6 AM kusvika 00:5 PM PST tisingasanganisire mazororo enyika.
Mamwe matunhu anoda kuti iwe upe magwaro ekushingaira kwakakodzera kambani isati yaiswa kana kuendeswa. Aya magwaro anogona kusanganisira asi anogona kunge asina kuganhurirwa kune notarized kopi yepasipoti, yepakutanga bhiri rekushandisa, zvirevo zvebhangi, uye/kana tsamba yekubhengi. Mune dzimwe nzvimbo, tinogona kufaira asi hatikwanise kuendesa kambani yako zviri pamutemo kudzamara wapa magwaro. Mune dzimwe nzvimbo tinobhadhara asi hatigone kufaira kambani yako kudzamara wapa magwaro anodiwa. Zvimwe zviitiko zvinoda maonero emutemo. Mamwe magwaro angada kushandurirwa muchiRungu kana mumwe mutauro. Kana paine muripo weizvi zvimwe zvinodiwa, ndiwe une mutoro wazviri. Isu tinotambura nemari yekumisikidza kambani senge hurumende nemubhadharo wemumiririri uye mari idzi hadzizodzoserwe kwatiri. Iwewo, unobvuma kuti ndiwe une basa rekupa magwaro anodiwa, zvisinei nechikumbiro, uye kuti mari yekudzosera haiwanikwe kana ukasatevedzera mutemo wekuita basa.
Kugutsikana kwevatengi kunoreva chimwe kana zvimwe zvezvinotevera: (1) kuti magwaro anotambirwa kufirita uye kufaira zvakadhindwa nesangano rehurumende, kana (2) kuti magwaro akarayirwa akanyorwa uye akaunzwa kungave neanotakura, kuendesa kwemagetsi kana dzimwe nzira. kana (3) kuti masevhisi akarairwa akaitwa. Kana chero chepamusoro chiri chechokwadi chechimwe chikamu cheodha, unobvuma kuti iwe unogutsikana nehurongwa hwese.
TINOTAURA ZVESE ZVITARISITI, KANA KUTAURA KANA KUTI ZVINONYANZISWA, Zvekutengesa KANA KUFANIRA CHINANGWA CHAKANAKA. Dzimwe nzvimbo hadzibvumiri izvo zvinorehwa kusabvumidzwa, saka kubviswa pamusoro apa hakungashandise kwauri.
Panogona kunge paine yekuwedzera yehurumende kana imwe mari inobhadharwa mushure mekunge kambani yako kana rimwe gwaro ragadzirwa kana kuiswa uye / kana kuendeswa kwauri. Semuenzaniso, iyo US State yeNevada inoda rondedzero yevakuru kuti iiswe nguva pfupi mushure mekunge mubatanidzwa waiswa. Nezvekunyora uku mubhadharo wekufambisa imadhora zana nemakumi mashanu pamwe nemadhora mazana mashanu emari yerezinesi rebhizinesi. Mumwe muenzaniso ndewekuti Nyika yeCalifornia ine gore negore prepaid franchise mutero mumari inosiyana zvichienderana nemari inofungidzirwa yekambani. Kana iwe wakatenga chembere/sherufu kambani, mari yekuvandudza inogona kunge iripo mushure menguva yako yekutenga. Nekuda kwekuti mari idzi hadzina kufanira payakafayirwa kambani kwekutanga, LL inogona kana kusakubhadharisa nekuda kweichi chinotevera chinodikanwa chekuisa muyero yekutanga mubhadharo. Iwe unozodikanwa kuvhara inotevera nyika, nyika, mumiriri uye/kana imwe mari zuva rakakodzera risati rasvika kuitira kuti uchengetedze kambani yako kana chimwe mubatanidzwa chiri muchimiro chakanaka mudunhu kana nyika yekuumbwa. Iwe zvakare unowanzo kudikanwa kuchengetedza mumiriri akanyoreswa sevhisi yezvemitemo mudunhu kana nyika yekubatanidzwa uye chero hutongi uko kambani yako, zvinoenderana nehutongi hwakasiyana, iri kuita bhizinesi. Kana LL ichikubhadharira kuvandudzwa kwesangano rako repamutemo, isu tinowanzo kuzviita nemazvo zuva rakakodzera risati rasvika. Izvi zvinodaro nekuti kazhinji kune faindi, mubhadharo wakanonoka, zvirango uye/kana kubvisirwa mabasa kunotemerwa makambani kunonoka kunyoreswa. Kubhadhara kwekutanga kunotipa mutsara wekubatsira kudzivirira hurumende kana chimwe mubatanidzwa kubva kumhedzisiro yekunonoka kunyoreswa. Ibasa rako uye kwete reLL kuchengetedza mudziyo wako wepamutemo uri muchimiro chakanaka. Kune miripo yekuvandudza yematrust epasi rese anosanganisira, asi zvisingaite kuti angogumira kune, trustee nemari yehurumende. Nezvekunyora uku mubhadharo weakanyoreswa mumiriri masevhisi imadhora zana nemakumi masere nepfumbamwe pagore kune chero nyika yeUS uye $150 pagore mune chero dunhu reCanada. Mari yekuvandudza inosiyana kune dzimwe nyika. Kana iwe ukasabhadhara mari yako yekuvandudza nehurumende uye kambani yako inopinda mune imwe nzira yekuzvidza hurumende (izwi rinosiyana nenyika), ndicho chiratidzo chako chekuti hauchada kambani. Saka, iwe unotipa mvumo yekushandisa nzira yako yekubhadhara pafaira kuti mumiririri wako arege basa pakambani yako. Kana iwe ukasazivisa LL neimwe nzira nekunyora isati yasvika yekuzvidza iyo inobvumwa mukunyora nevatungamiriri, unopa LL mvumo yekuisa kambani yawakaratidza kuti hauchadi kutengeswa sekambani yakwegura, gadzirisa zita rayo uye/kana. dzorera kumira kwayo.
Kana odha yako ichisanganisira Individual Retirement Account (IRA) unobvuma kuti une mutoro wakazara wekutevedzera Internal Revenue Service (IRS) uye mamwe nhungamiro inoshanda. IRAs inoda vatariri. Vachengeti vanoda kubhadharwa kwesevhisi yavo iyo inowanzoenderana nekukosha kwezvinhu zviri mukati meIRA yako muhusungwa. Unobvuma kuti iwe une mutoro wakazara wekubhadhara muripo kune muchengeti uye hapana chakaunganidzwa neLL kumberi kune mamwe masevhisi chinosanganisira muripo unochaja muchengeti weIRA.
Mimwe mitemo yenyika inoda kuti kambani ibudise kuvapo kwayo mupepanhau rakasarudzwa. LL inogona, pachisarudzo chayo chega, kuita basa iri kumutengi, kunyanya kana zvichidikanwa kune anopinza kana murongi wesangano. Chirevo pane yedu webhusaiti kune iyo mamiriro ekuti iyo kuumbwa "Mutengo unosanganisira kushambadzira mari pazvinenge zvichidikanwa" zvinoreva pazvinodikanwa zvemubatanidzi kana murongi. LL haizoburitse kana kubhadhara mari yekushambadzira mune mamwe matunhu, kusanganisira asi kwete kuganhurirwa, kudhinda zvinodiwa zveNew York Limited Liability Company. Iwe unoziviswa izvi kuti kana iwe ukakumbira kuumbwa kweNew York LLC izvo zvinoda kuburitswa zvinogona kunge zvichidhura zvakanyanya kupfuura kutanga kwekuumbwa kweiyo LLC pachayo uye uchave uine basa nemari iyi.
ZANO PAMUTEMO kana MARI uye KUMIRIRA
LL ibasa rekudhindisa painternet. Zvishandiso zviri pawebhusaiti ino zvine ruzivo rwekushandiswa kwese uye hazvina kuitirwa kutsiva zano regweta. Nepo vashandi vedu vachishandisa nhamburiko huru kuchengetedza uye kuburitsa ruzivo rwakakwana, mitemo yeNyika, yeProvince uye yeFederal ine simba uye inogara ichishanduka. Pamusoro pezvo, mitemo yakavhurika kududziro dzakasiyana uye inosiyana zvakanyanya pakati penzvimbo dzakasiyana.
Paunenge uchishandisa sevhisi yedu, unenge uchiita kunge gweta rako pachako. LL inopedzisa ruzivo pamafomu anodiwa zvichibva neruzivo rwamakatipa mune yako "Chikumbiro cheInorporation" kana "LLC Fform" kutumira uye mafaira mafomu anodiwa nenyika yakakodzera, purovhinzi kana mubatanidzwa. Nekukupa iwe sevhisi, LL, vanachipangamazano vayo, vamiririri, vamiririri, uye vashandi havasi kupa chero mutemo, mutero kana rimwe zano rehunyanzvi kana sevhisi, uye hapana mamiririri kana warandi, inoratidzira kana kutaurwa, inopihwa maererano nezvepamutemo kana zvimwe zvinokonzeresa. zvichikonzerwa nekushandiswa kwemasevhisi edu kana mafomu.
LL, vanachipangamazano vayo, vamiririri, vamiririri, uye vashandi havasi kuita tsika yemutemo uye havagone kukupa rairo yemutemo. Kunyangwe LL ichishandisa zvakanyanya kuedza uye ichiremekedza zvakavanzika zveruzivo urwo urikutitumira, HAPANA KUSANGANA KUKOSHA kana ropafadzo iripo pakati peLL newe, kusanganisira asi isingagumi kune chero Gweta-Mutengi hukama hungangovapo kana iwe wakabvunza negweta rine marezinesi. .
Kana iwe ukataura negweta rakabatana neLL, unobvuma kuti hapana chinofanira kutorwa sezano repamutemo kune chero nyaya yemunhu kana mamiriro. LL uye / kana vanobatana nemagweta vanopa ruzivo rwezvese chete, havazi varapi vemitero, uye havana uye havazokupe chero mutemo wezvemitemo, mutero kana kutevedzera zvine chekuita nebasa redu. Iwe unozofanirwa kutsvaga yakazvimiririra yehunyanzvi pamutemo uye mutero kuraira. Mazhinji kana ese masangano akagadzirwa LL anoitirwa kusarerekera mutero uye kuti chero mari inowanikwa, kungave kubva kune yekumba kana yepasi rose bhizinesi, inotsanangurwa mugore rakawanikwa zvisinei nekuti mari dzakadai dzakabviswa muboka kana kudzoserwa mune masangano epasi rese. Kupfuurirazve, chero ruzivo rwunowanikwa kubva kuLL uye / kana makambani akabatana uye / kana gweta (s) haina kuitirwa kuti igadzire, uye kukurukurirana, kutambira, kuona kana mumwe director kana kusangana zvisina kunangana hazviite, gweta-hukama hwevatengi uye chero muripo unobhadharwa haifanirwe kutarisirwa semutemo fizi.
Sezvazvakaita nenyaya dzese dzakakosha dzebhizinesi, LL, vanachipangamazano vayo, vamiririri, vamiririri, uye vashandi vanokurudzira zvakasimba kuti ubvunze negweta rakapihwa mvumo yekuita mutemo uye CPA ine marezinesi munzvimbo inoshanda maererano nekuumbwa kwesangano rako, LLC, trust kana chimwe chigadzirwa kana sevhisi yatinopa uye nekuenderera kwayo mashandiro.
Mari, Kubhadhara uye TERM
Sekufunga kwemasevhisi awasarudza, unobvuma kutibhadharira ino shumiro (s) fizi. Yese fizi inobhadharwa pazasi haina kudzoserwa kunze kwekunge isu tapa neimwe nzira. Sekuenderera mberi kwekutarisa kweMasevhisi, unobvuma ku: (1) kupa rumwe ruzivo rwazvino, rwakakwana uye rwechokwadi pamusoro pako sezvinodiwa nemaitiro ekunyorera uye (2) chengetedza nekuvandudza ruzivo urwu sezvazvinodiwa kuti urambe uripo, rwakakwana uye rwakarurama. Ruzivo rwese rwakadai runozonzi ruzivo rweakaundi ("Akaundi Ruzivo").
Iwe pano unotipa kodzero yekuzivisa kune vamwe mapato akadai Akaundi Ruzivo. Nekuzadza nekutumira kunyoresa zita rekambani kunyorera, unomiririra kuti Ruzivo rweAccount muchikumbiro chako nderechokwadi uye kuti kunyoreswa kweZita reKambani rakasarudzwa, kusvika zvino sekuziva kwako, hakuvhiringidze kana kukanganisa kodzero dzechero chechitatu pati. Iwe unomiririra kuti zita rekambani harisi kunyoreswa chero chinangwa chisiri pamutemo.
Kana iwe ukakumbira mvumo yakagovaniswa muZvinyorwa zvako zveInorporation izvo zvinopfuura huwandu huwandu hwezvikamu zvinotenderwa nenyika yakasarudzwa yekufaira, purovhinzi kana nyika kune mari yepasi yekufaira, iwe ndiwe unongobhadharira chero uye nemitero yemitero yakaitwa chero nguva. . Mamwe, asi kwete ese, masimba anobhadharisa mari yekuwedzera yekufaira kana huwandu hwenzvimbo uye / kana huwandu hwesitoko par kukosha huchiwedzera. Ndiro basa rako kuongorora huwandu hwakawanda hwezvikamu zvinotenderwa nenyika, dunhu kana nyika kuti uwane mari yekufaira yakaderera. Huwandu hwezvikamu zvakagamuchirwa muZvinyorwa zveKubatanidzwa zvinosarudzwa pane wega kusarudza. Kana iwe ukasatiraira neimwe nzira, yakajairwa masheya dhizaini zvikamu gumi neshanu pasina mutengo wakatarwa kunze kwekunge iwo ari echinyakare manhamba anosiyana mune imwe nzvimbo yekutonga kana mashoma masheya anokodzera iwo mashoma mafirita fizi.
Kana zvichiita, LL inoendesa magwaro kuhofisi yehurumende yakakodzera kuti inyore. Kana LL ikagamuchira magwaro kubva kuhofisi yehurumende, LL, zvakare, inotumira magwaro kwauri maererano nepakiti yawakaraira. Unobvuma kuti hofisi yehurumende, uye kwete LL, inodzora mafiremu enguva iyo magwaro ekambani anoiswa uye anodzoserwa kuLL. LL haiite zvivimbiso zvenguva nekuti LL haidzore nguva yemasangano ehurumende kana nguva yeruzivo / zvinyorwa zvaungade kupa.
Mushure mekumisikidzwa kwesangano, kana kitikiti chekambani kana bhuku rekodhi rekodhi rakaverengerwa neodha yacho, rinofanira kugadzirwa mushure mekunge zita rekambani raunzwa uye ratenderwa nehurumende. (Chikonzero cheichi ndechekuti hazvigoneke kuodha kit yemubatanidzwa kudzamara hurumende yabvumidza zita racho kuti kit isagadzwe ine zita rakarambwa nehurumende.)
KUDZIDZA NOKUDZIDZA ZVINODIWA
LL haina basa rekukuraira kana kukuyeuchidza nezve chero zvinodiwa kana zvisungo, zvinosanganisira, asi zvisingaganhurirwe kune chero mishumo yegore, mafomu emutero, mutero unofanirwa, kana nyika, purovhinzi, dunhu kana federal kudhindwa zvinodiwa kana mubhadharo une chekuita nechigadzirwa kana sevhisi isu. kupa kwamuri. Nezvekunyora uku kune 3,007 muUnited States ine zvakasiyana-siyana zvekufambisa zvinodiwa uye mubhadharo. Nekuda kwehuwandu hwematunhu uye mamwe masimba uye inogara ichichinja mirau, ibasa rako kutsvagisa miripo yekufambisa, mutero uye zvimwe zvinodiwa mudunhu rako, paramende, nyika, nyika kana humwe hutongi hwakakodzera. Kuita kweLL muchigadzirwa chako kana sevhisi kunopera panguva iyo chigadzirwa chako kana sevhisi inogadzirwa. Chese chinodiwa kana zvisungo zvekuchengetedza chigadzirwa kana sevhisi HASI basa reLL uye ibasa rako wega. Kunyanya, kunze kwekunge waita chibvumirano chekuti LL iite kudaro, chero nyika, purovhinzi, dunhu kana mubatanidzwa zvinodikanwa zvine chekuita nesangano rako, LLC kana chimwe chigadzirwa kana sevhisi richava rako wega basa. Izvi zvinosanganisira, asi hazvina kuganhurirwa, kufaira kweChitsauko S Corporation sarudzo yako. Fomu rekunyorera chimiro cheS-Corporation rinofanira kusainwa nemukuru wekambani yako. Sezvo isu tisiri mukuru wekambani yako hatigone kusaina nekuisa fomu iri. Kunyangwe kana masevhisi akasarudzwa / mutungamiriri / maneja achiitwa, isu hatizosungirwe kufaira fomu rakadaro kana kutora matanho wakamiririra kambani kunze kwekunge tapihwa mvumo nebato rakakodzera mukunyora. Isu hatina mhosva yekushaikwa kana kunonoka mafomu emutero kana mamwe mafirita, zviito kana kusaita kunze kwekunge abiridzira nemaune, pakadaro uyo anosarudzwa, kwete LL, ane mhosva. LL ibhuku rekugadzirira uye sevhisi yekuisa uye kwete mutero kana femu yepamutemo. Mutero uye zvinodiwa zvemutemo zvinofanirwa kuwanikwa kuburikidza neanerezinesi, ruzivo, kudzidzira nhengo dzeaya mabasa akadai semagweta nemaakaunzi.
Kana, kune imwe muripo, ukakumbira rubatsiro rwedu mukuvhurwa kweakaundi yekubhanga, tichaita nhamburiko yekuvhura account inogutsa zvaunoda. Nekudaro, unobvuma kuti LL haidzore masevhisi anopihwa nebhangi kana kuti ndeapi mabhangi anozovhura kana asingazovhure rudzi rweakaundi yaunoda, kana kuedza kwako kuzadzisa zvinyorwa zvebhangi zvinodiwa. Unobvuma kuti bhangi, asi kwete LL, inodzora kumhanya uko iyo account yebhangi ichave kana isingazovhurwa. Unobvuma kuti iwe une basa rekuzadza bhengi rekuvhura account yekubhengi yakazara uye nekupa ruzivo rwese rwunokumbirwa nebhangi kuvhura account. Mamwe mabhanga anobhadharisa imwe mari yekuvhura account yekubhangi, iyo yakasiyana kubva, uye kuwedzera kune, muripo wesevhisi yedu.
Zvinowanzo kuve mune zvaunofarira kuti usataure kubhangi kusvikira yapfuura account yacho kuvhurwa. Icho chikonzero ndechekuti isu takaona vatengi pazviitiko zvakawanda vachitaura zvirevo kubhanga kana kutaurirana kubhangi nenzira yekukanganisa kuvhura account.
Unobvuma kubata LL isingakuvadzi pamitemo nemabhangi kusanganisira, asi isina kuganhurirwa kune, zvinotevera: bhanga rinoramba kuvhura account, bhangi rinotora nguva yakawanda kuvhura account kupfuura iwe zvaunoda, bhanga rinokumbira rumwe ruzivo pamberi pebhangi ichavhura account, shanduko mumutemo webhangi, kutadza kuvhura account nebhangi rine kufamba-nyore mubazi, kukosha kwekuisa mari uye kubvisa nepositi pane kufamba mubhangi, mari inotora nguva yakareba kuti ibude pane mutengi anoshuvira, mutauro wekunze unoshandiswa kubhanga, bhangi risingape ese masevhisi anodikanwa nemutengi, kusanganisira, asi asingaganhurirwe pakukwanisa kutengesa mari kunze kweaccount kana kuvapo kana kusavapo kwemakadhi echikwereti kana echikwereti kana kuvapo kana kusavapo kweInternet kuwana iyo account, kana bhangi rinoda kuti iwe uende kubhangi uri munhu account isati yavhurwa. Kana iro bhangi richida kufamba iwe unenge uzere nemhosva kune chero uye zvese zvekufamba uye zvine chekuita nemari. Mune zvimwe zviitiko, sarudzo chete inonzwisisika ndeyekuvhura iyo account kubhangi iyo isina matavi ekufamba-fanira kune mutengi kana bhangi risina matavi ekufamba. Kana iyi iri mhando yeakaundi iyo LL iri kukwanisa kukuvhurira iwe, unobvuma kuti LL yazadzisa chisungo chayo.
Hapana nyaya iyo LL inosungirwa kudzorera mari yese yakabhadharwa kune zvimwe zvigadzirwa uye masevhisi akatengwa kuwedzera kubhengi account nekuti account yekubhangi haina kukwanisa kuvhurwa kana kana iwe usingagutsikane nesarudzo yemabhangi. Izvi ndizvo zvazvakaita kunyangwe chikonzero chikuru chawamisa sangano repamutemo kana kuodha masevhisi akabatana chaive chechinangwa chekuvhura account yekubhanga kana kuti zuva rakakosha rakapotsa nekuda kwekunonoka kuvhurwa kweakaundi yebhangi. Semuyenzaniso kana iwe wakaodha LLC neakaundi yekubhangi uye bhangi rako raunosarudza rakaramba kuvhura account, mushonga chete ndeweLL, pakusarudza kwayo, kudzosera chete chikamu chemuripo wakabhadharwa uyo LL unoona kuti une chekuita neakaundi yebhangi. kuvhura, mari shoma uye nguva yakaitwa, kana kukupa imwe sarudzo yekubhanga. LL yakaita tsvakiridzo yakakura yekutsvaga mabhanga anozovhura maakaundi iwe usingavepo, ayo anoona sekuti masangano akagadzikana uye anopa basa rinonzwisisika. Ibasa rako kupedzisa kunyorera account yebhangi, kupa inodiwa-kushingairira uye kupa mamwe magwaro anokumbirwa nebhangi. Mabhangi anosungirwa kuti atarise makasitoma awo kune zviri pamutemo uye zvehunhu. Kutadza kuita izvi kunogona kuita kuti bhanga rirasikirwe nerezinesi raro uye/kana kudzikisira kugona kwaro kuita kutengeserana kune dzimwe nyika. Saka, mabhangi haazivikanwe nekuita kunze kune avo akakodzera-kushingaira zvinodiwa.
Chaizvoizvo zvekuvhurwa kwebhangi zvinodiwa zvinosanganisira, asi hazvingogumiri, kupedzisa account account, kusaina siginecha kadhi, kupa kopi inozivikanwa yepasipoti yako, yepakutanga yekushandisa bhiri ine kero yako yekugara, zvinyorwa zvako zvekambani, bhangi uye / kana rezita rehunyanzvi. tsamba uye zvimwe zvinodiwa zvinosiyana zvichienderana nebhangi. Bhengi rinowanzo fona kuti rione chokwadi chemagwaro. Nekukupa iwe nemazita ekubhengi LL inoona sezvingabvira uye ichiedza kukupa iwe magwaro ekuvhura account kubhangi, LL yazadzisa chisungo chayo pasi pechibvumirano ichi.
Kana iwe ukaodha zvimwe zvinhu kana masevhisi, ekuwedzera, duplicate, magwaro ekushingaira anogona kudiwa. Semuenzaniso, kana iwe wakaodha akaundi yekubhangi, mutemo ungada kuti bhangi richengetedze seti yepakutanga yechitupa chako uye magwaro ereferenzi. Mitemo inogona zvakare kuda kuti trustee kana mupi webasa rekambani ave neseti yepakutanga yemagwaro ekushingairira. Saka, iwe ungangoda kupa akawanda seti ekutanga.
KUVIMBIKA, HERE ZVINHU & DOCUMENTATION
Mitemo yemuno neyepasi rose iriko yekudzivirira kubiridzirwa kwemari nekumwe kuchengeta kana kufamba kwemari isiri pamutemo. Saka nekudaro, matirastii, vemabhangi nevamwe vari muindasitiri yemabasa emari vanofanirwa kuona mapato akakodzera kutevedzera mirau iyi uye kuti kana zvikumbiro zvekubvisa kana zvimwe zvikumbiro zvikaitwa, izvo zvakakosha zvinopihwa kumapato akakodzera. Naizvozvo, pane kuziva-kwako-mutengi zvinodiwa izvo zvinofanirwa kuzadzikiswa. Matirastii haawanzo kuita musiyano kune akakodzera-kushingairira anodikanwa nekuti kuita kudaro kunogona kukonzera faindi uye / kana kurasikirwa kweirisensi yekuita bhizinesi.
Iri rinotevera runyorwa rwevamwe, asi kwete hazvo zvese, zvemagwaro anowanzodiwa kubva kumutengi kuitira kuti vagadzire chivimbo chenyika dzese: Client Assessment Data Fomu, Afidhavhiti yeSolvency, Uchapupu hweKunobva Mari, Trust Information Gwaro, Iyo Mari Laundering Control Act, Deed of Indemnity, Kopi yemifananidzo peji repasipoti yako (kana kopi rezinesi rako rekutyaira mune dzimwe nguva rinokwana) zvinonyatso zivikanwa neNotary Veruzhinji, Yekutanga zvinyorwa zvinyorwa zvekero yako (inofanirwa kunge iri yekutanga bhizinesi rekushandisa, chirevo chekadhi rechikwereti kana chirevo chebhangi - chinofanirwa kunge chiri chekutanga kwete kopikopi), Tsamba yekunongedzera kubhangi. Iwe unozokumbirwa kusaina mamwe magwaro ari pamusoro apa uye kuti upe kopi yepasipoti sezvataurwa pamusoro, bhiri rekushandisa (kana zvimwe sezvakataurwa) uye tsamba yekutsvaga kubhangi. Rondedzero iri pamusoro inoitirwa kupa muenzaniso wezvinyorwa zvinowanzodiwa asi hapana vimbiso inoitwa yekuti mamwe magwaro haazodiwa uye / kana zvimwe zvikumbiro zvakaitwa.
Iwe une basa rekupa ruzivo rwekupedzisa kwekuvimbika, kusanganisira ivhu kutendeka, kurarama netariro uye mamwe magwaro, kusanganisira asi kwete kuganhurirwa kumagwaro enhema pamwe nekutipa isu mazita enhengo. Isu tinoita basa rekugadzirira uye tinowana mari usati wapa ruzivo kuti upedze zvinyorwa zvako. Nekudaro, kutadza kwako kupa ruzivo rwatinoda kuisa ruzivo rwako muzvinyorwa hachisi chikonzero chekudzoserwa nekuda kweizvi zvisingadzokorore mari yekugadzirira.
Kiredhiti kadhi mutengesi maakaunzi anoshandiswa kubhadharisa vatengi vako vanobhadhara nekadhi rechikwereti. Kana, kune imwezve mari, iwe uchikumbira rubatsiro rwedu mukuvhurwa kwekadhi rechikwereti mutengesi account, isu tichaita nhanho yekuvhura account inogutsa zvaunoda. Nekudaro, iwe unobvuma kuti LL haina kudzora masevhisi anopihwa nekambani yevatengesi account, iyo mitero inopihwa, kana kuti ndevapi vatengesi vanozo vhura kana vasingazovhure mhando yeakaundi yaunoda, kana kuedza kwako kupedzisa zvinyorwa zvinodiwa zveakaundi yevatengesi. Unobvuma kuti kambani yevatengesi, asi kwete LL, inodzora kumhanya uko iyo account yemutengesi ichavhurwa kana kusazovhurwa. Unobvuma kuti iwe une basa rekuzadza iyo account yemutengesi zvese uye nekupa ruzivo rwese rwakakumbirwa nekuvhura account.
LL HAIYE KUVIMBISA VANHU VANOTENGESHA NZIRA DZEMAHARA KANA MAZWI. KUDZIDZISWA KWAKAITWA NEMUSHANDI WENYAYA YENYAYA PASI PEKUTI VAEDZESA KUSHANDA KWAKO. UNOBVUMIRIRA KUTI LL HAIYO INONZWISIRA YEMAHARA DZIMWE DZIMWE DZIMAI DZINODZIDZISWA NEVANHU VANOTAURA.
Unobvuma kubata LL isingakuvadzi pamitero yeakaundi yevatengesi nemamiriro kusanganisira, asi kwete kuganhurirwa kune, zvinotevera: kambani yevatengesi kambani ichiramba kuvhura account, kambani yeakaunti yevatengesi inotora nguva yakawanda kuvhura account kupfuura iwe yaunoda, account yevatengesi. kambani inokumbira rumwe ruzivo vasati vavhura iyo account, iyo bhangi inoda kutanga dhipoziti, shanduko mune mutemo, kutadza kuvhura account nemitero iwe yaunoda, kusakwanisa kuvhura account yemutengesi nemazita aunoda, iyo account yevatengesi kambani kwete ichipa zvese masevhisi kana zviyero zvinoshuviwa nemutengi, kusanganisira, asi zvisina kuganhurirwa, mari, matura, marongero evatengesi nevamwe.
Mune zvimwe zviitiko, sarudzo chete inonzwisisika ndeyekuvhura account yemutengesi kukambani inobhadharisa yakakwira kupfuura mwero mitengo. Izvi zvinonyanya kuitika kana iyo kambani yevatengesi kambani inofunga kuti bhizinesi iri re "yakanyanya njodzi" chikamu, zvisinei nekuti mutengi anonzwa kuti bhizinesi iri njodzi yakanyanya kana kana mutengi aine nhoroondo yakachena kana rekodhi rekodhi. Kana iyi iri mhando yeakaundi iyo LL iri kukwanisa kukuvhurira iwe, unobvuma kuti LL yazadzisa chisungo chayo.
Hapana nyaya iyo LL inosungirwa kudzosera mari yese yakabhadharwa kune zvimwe zvigadzirwa uye masevhisi akatengwa mukuwedzera kune kadhi rechikwereti account yemutengesi nekuti kambani yemutengesi account haina kukwanisa kuvhurwa kana kana iwe usingagutsikane nesarudzo yemakambani eaccount account. . Izvi ndizvo zvazviri kunyangwe chikonzero chikuru chawakaita kuti utange sangano repamutemo kana kuodha masevhisi akabatana nawo chaive chechinangwa chekuvhura account yemutengesi kadhi rechikwereti kana kuti zuva rakakosha rakapotsa nekuda kwekunonoka kuvhurwa kweakaundi yevatengesi. Semuyenzaniso kana iwe wakaodha mubatanidzwa neakaundi yemutengesi uye kambani yemutengesi account yaunosarudza yakaramba kuvhura account kana kubhadharisa mitengo yakakwira kupfuura yaunoda, mushonga chete ndeweLL, pakusarudza kwayo, kudzosera chete chikamu chemuripo. yakabhadharwa inoonekwa neLL ine chekuita nekuvhurwa kweakaundi yemutengesi kana chikamu chemuripo wataurwa, mari shoma kubva muhomwe, kana kukupa imwe sarudzo yeakaundi yevatengesi. Mari inobhadharwa pakuvamba account yemutengesi inobhadharwa kune vechitatu kuti vaongorore njodzi, saka kazhinji mari inobhadharwa kutanga mutengesi haidzoreki zvachose. LL yakaita tsvakiridzo yakadzama yekutsvaga makambani eakaundi yevatengesi anovhura maakaundi emabhizinesi akaderera, epakati uye ane njodzi huru, ayo yaanoona sekuti masangano ane musoro uye anopa basa rinonzwisisika. Nekupa iwe mazita emakambani eakaundi yevatengesi LL inoona sezvingabvira uye kuedza kukupa iwe mutengesi magwaro ekuvhura account kana kutumira, LL yakazadzisa chisungo chayo pasi pechibvumirano ichi.
Chirongwa chemuhofisi, icho chinowanzo kuve nenhamba yefoni, nhamba yefakisi nekero zvinopihwa seyakareruka mutengi chete. Iyo hofisi purogiramu nhamba yefoni kazhinji kazhinji yakagovaniswa nhare mbozha inopindurwa kumakambani mazhinji. Naizvozvo, bato rekushevedza rinofanira kusiya zita rekambani yavari kushevedzera kuti tizive kuti meseji iyi inofanira kutumirwa kunaani. LL haina mhosva yekurasikirwa netsamba, kufona, fax, kurasikirwa nemikana yebhizinesi kana chero kurasikirwa kwese. Sezvingatarisirwa, kudzoserwa hakuwanikwe kana sevhisi yatanga nekuti LL inotakura izere mutengo wechirongwa chehofisi kumberi.
CORPORATE Kiredhiti & YEMAHARA / SHELF KAMPANI
Aya maSevhisi eSevhisi anotsanangura chiyero uye kutapudzwa kwezvisungo zveKambani kuMutengi uye neAnogamuchirwa Mashandisirwo Mapurisa emaSevhisi uye Zvigadzirwa neMutengi. Kambani ichave yega uye yekupedzisira arbiter maererano nekududzirwa kwechibvumirano. Nekushandisa maSevhisi eKambani uye Zvigadzirwa, Mutengi anobvuma kusungwa nemitemo yakataurwa muchibvumirano ichi.
Kana ikarairwa, Kambani inozopa mubatanidzwa kana yakatemerwa chikwereti kambani kuMutengi. Iyo Kambani inozopa Mutengi nepaketi inogamuchirwa neemail kana kutumira kwetsamba. Mutengi ane basa rekuzadza paseti yekutambira uye kuidzosera yakapedzwa zvakanaka kuKambani. Kamwe pakiti rekugashira (iro rinoreva kunyorera uye / kana mamwe magwaro akakumbirwa) rapedzwa neMutengi uye rodzoserwa kuKambani, Kambani inozopa ruzivo kuDun & Bradstreet nechinangwa, asi kwete vimbiso, yekupa zvinotevera mabasa :
1.Govera bhizinesi chikwereti chimiro neayo kana rimwe bhizinesi rechikwereti bureau.
2.Kurumidza kuita chirongwa chekuvaka chikwereti neKambani kana vanobatana navo vachibhadhara mari yekukurumidza kune vechikwereti inoshumisa agency (ies) kana iwe wakabhadhara basa rinokurumidza.
3. Govera Dun & Bradstreet (D&B) portfolio uye account.
4. Gadzira mishumo mikuru mitanhatu yeD&B yechikwereti.
5. Gadzira iyo 5 D&B mamaki uye ratings mumishumo mitanhatu.
6. Tumira kune ruzivo rweD&B rwavanokumbira kuti vagadzire maD&B zviyero uye ratings.
7. Batsira mukumisikidza vatengi kutarisisa 4-6 mareferensi ekutengeserana ekambani.
8. Ongorora iyo 6 D&B chikwereti portfolio.
Mutengi achaita zvinotevera:
1. Nyatso zadzisa paseti yekugashira woidzosera kuKambani yakabatana.
2. Govera ruzivo rwese rwakakumbirwa neKambani uye / kana mubatanidzwa wayo kupedzisa nhoroondo yechikwereti.
3. Tevedza iko kutungamira kweKambani uye / kana mubatanidzwa mune yekupedzisa nhoroondo yechikwereti.
Kambani yakwegura kana shefu yemasherufu ikambani, LLC kana chimwe chinhu chakafanana chakagadzwa pazuva rapfuura.
KUSHANDISWA KWEZVINHU ZVINOGONESESA NEZVINHU ZVINOGONESESA PAMUSORO PATSVIRO. HAPANA KAMPANI KANA VASHANDI VAYO, MAGENESI, VATENGESI VATATU VANODZIDZISA VAMWE VANOTAURA, VATENGESI VEREKESI KANA KUFANANA, GADZISA ZVINOGONESESA ZVINOGONESESA ZVINOGONESESWA NEZVIMWE ZVINOGONESESA ZVINOKOSHA ZVINOKOSHA ZVINOGONESESA KANA VANOITA KUTI VANZWE VANOGONESESA SEZVINOGONESESWA KUSHANDISWA KUSHANDISWA KWEZVINHU ZVEKAMPANI NEZVINHU ZVINOGONESESA, KANA KUVIMBIKA KWENYAYA YEMAHARA YEMAHARA KANA KUTI MERCHANDISE YAKANYANYA KANA KUTI VAPERESE KUSHANDISA KOMASHARA YEMAHARA. KUNE KUTI KUSHURE KWEZVIMWE ZVINOTAURWA ZVAKANAKA MUCHIBvumirano CHINO. Izvi ZVINOSANGANISIRA KURASIKWA KWENYANZVI, KUNYANYA KUKONZESA KUNONOKA, KANA KUTADZIRA KUWANA MWEYA ANODA KUKWADZIRA KUTENGA KUTENGA KANA KUTI KUSAKONZESERWA NEKAMPANI NEVASHANDI VAYO KANA ZVIMWE ZVINOKONZESA. HAPANA ZVIMWE ZVIBvumirano, ZVINOKOSHA ZVINOSANGANISWA. KAMPANI HAISI YOKUKOPA NAYE NDIYO KAMPANI INODZIDZISWA YOKURONGA ZVIMWE ZVIMWE MUTENGI. KAMPANI INOPA ROPA ROKUDZIDZA. MUTengi ANOGONESESA KUSHANDISA Kiredhiti RUFANANIDZO KUTI UVE NEZVIMWE ZVINOGONESESWA KUNE ZVINODIWA NOMUTENGI. EIN KANA KUTI ID ID YEMAHARA YEMAHARA / SHELF KAMPANI INOGONESA KUFANANA Zera REKAMPANI uye INGANGOVE ICHIKOSHESWE IZVOZVI.
CHIMWE CHIMWE CHIMWE CHIMANGWA CHEKAMPANI YEMAHARA ZVESE ZVINOITWA NEVATENGESI, KANA CHIMWE CHIMWE CHIKAMU, KUNYANYA KWEFOMU, KUSANGANISIRA CHIKONZESO CHEMAITIRO CHAKABATSIRWA PABHASIRA, TORT KANA KUSIMBISA KUSIMBISA, HAZVIMBOTI MHURI YOSE YEMAHARA YEMAHARA YOSE NEMUTENGI KUSVIRA ZVINODZIDZISWA ZVINOBVUNZWA NEKAMPANI. Aya masevhisi ari pamusoro anogona kutora anosvika zana nemakumi maviri neshanu mazuva ebhizinesi kubva pazuva rinodzoka Mutengi uye Kambani inogamuchira paseti yekugashira yakanyatso zadziswa.
NEKUTI ZVINOGONA KUTI ZVINOGONESESA ZVINOKOSHA KUKOSHESA CREDIT PROFILE, MUTENGI ANOBVUMIRA KUTI ASANGANE Kiredhiti KUSHURE KWEGENESI ZVINOGONESA KUSVIKIRA NGUVA YAKANAKA PASI PASINA ZVAKAITIKA ZVAKANYORWA Mvumo YEKAMPANI. MUTENGESI ANONZWISISA KUTI PANE BASA RINOKOSHA ROKUGADZIRIRA RAKAITWA RISATI RAPIWA FILEI KUSVIMBIDZWA KWEEDHITITI KUSHORA AGENCY. PREMATURE FILE KUSIMBISA KANA KUTI KUSIMBIDZA KUSANGANA NEKUDZIDZA KUSHURE KUSANGANA KWEZVINHU KUNOGONA KUKONZESA PAMUSORO PAKRIDHITI REMUFANANIDZO NEVATENGESI VANOGAMUCHIRA ZVAKAZARA NEZVAKAZADZIRA KUSANGANA. KAMPANI INOGONESA KUMASHURE MBERI KUMASHURE MBERI ASI USADZORA DUDZIRO YAVO DZIDZO, IZVI ZVINOGONESESA KUTI VACHADUDZIRA KUTENGA SEZVINOGONESESA ZVINOTAURWA, ZVIKORO NEZVIMWE ZVINODIWA, ZVINOITIKA ICHAPEDZISWA KANA Iwe KANA KUTI Kiredhiti KUSHURE KUSANGANA KUSABATSIRA SEZVINODIWA. Chero ipi mari yekuwedzera sechikamu chehurongwa hwekuvaka chikwereti ichave iri basa remutengi. Izvi zvinotevera hazvizobhadharwe KAMPANI sezvo ari masevhisi anopihwa nekambani dzechitatu. Izvi zvinosanganisira, asi hazvirevi kuD & B kuisa mari kubva zero kusvika mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe emadhora, account yekutengesa yakamisirwa mubhadharo, mutengo wezvigadzirwa kubva kune vatengesi, STATE mafirita ekubhadharisa, rezinesi rebhizinesi, bhizinesi foni kumisikidzwa kana imwe foni inoenderana mubhadharo, mari yechikwereti yemunhu pachako, mubhadharo webhangi uye chero mimwe mitero inoenderana netsika yakajairwa yebhizinesi. Zvese zvataurwa pamusoro apa imari inofanirwa kutarisirwa nechero munhu anoronga kuve mubhizinesi.
Mutengi anonzwisisa uye anobvuma kuti iye / ivo / ivo vanofanirwa kushandira pamwe neIYO KAMPANI mukugadzirisa nyaya iyi, vachiita zvese zvinodiwa kupa KAMPANI iyi neruzivo rwunokumbirwa neICOMPANY; Zvakare, Mutengi achasiya BASA pasi pekutungamira nekutongwa kweKAMPANI chero bedzi chibvumirano ichi chichiri kushanda, uye Mutengi haazopa ruzivo kune chero chimwe chinhu kana vanhu vanobatanidzwa kana kutaurirana zvakananga kune chero mumwe munhu kana sangano nezvenyaya iyi. kunze kwekurairwa neKAMPANI SEZVINO ZVINOGONA KUTI VANOGONESA Kiredhiti RUFANANIDZO.
Uye zvakare, Mutengi anobvuma kubhadhara panguva yakakodzera zvese zveMutengi zvebhizinesi uye pachedu mabhiri / maakaundi kusanganisira asi asingagumi kumitsara yechikwereti, makadhi echikwereti, maakaundi anotenderera uye zvikwereti. Mutengi anobvuma kusanyorera chikwereti asina kupa ziviso kumberi kune KAMPANI. Mutengi anobvumawo kuti huwandu hwakazara hwechikwereti iyo KAMPANI inoshandirwa sevanachipangamazano kuti vabatsire kuwana ihwo huwandu hwesimba remutengi uye KAMPANI.
Kubva zvino, Kambani inoramba iine kodzero yekushandura Chibvumirano chero nguva uye nguva nenguva uye chero shanduko yakadaro ichave inoshanda yega kune vese vatengi kana yagamuchirwa neKambani uye yakaburitswa pane yakakodzera sub-peji ye https://lawyerslimited. .com/ kana inotevera nzvimbo sezvo webhusaiti inogona kuvandudzwa.
Kunyangwe zita rako kana munhu wauchadoma achizoonekwa pane zvinyorwa zvinotamisa kambani iwe kana waunoda, unobvuma kuti zita rako kana waunosarudza anogona kana asingaoneke muzvinyorwa zvekubatanidzwa kana zvinyorwa zvesangano. Pane gwaro rakaparadzaniswa iro rinoendesa iyo kambani kwauri kana kune waunopa. Izvi zvakaenzana nezita remugadziri wemotokari asara pamotokari, ipapo gwaro remusoro wenyaya riri kushandiswa sekutamisa zviri pamutemo. Saizvozvo, isu kana vamiririri vedu tinoumba mubatanidzwa seanobatanidza ?? uye gadzira yakashomeka yemari kambani semurongi ?? uye wozoisa magwaro anoendesa kambani kwauri. Mune zvimwe zviitiko, kambani yedu kana munhu watinomisikidza anozove iye wekutanga mukuru, director, nhengo kana maneja wekambani. Unobvuma kuti kuendeswa kwekambani kwauri kunowanzoonekwa pane zvinyorwa zvekuchinjisa kwete zvinyorwa zvacho.
Kana iwe wakaraira sevhisi inosanganisira kutumira tsamba, iwe unobhadhara kutumira uye kubata kwezvinhu zvinotumirwa kwauri. Dhipoziti yemakumi maviri neshanu emadhora ekuUS, kana zvimwe kana iwe ukataura, zvichawedzerwa kumubhadharo wekutumira tsamba yako sevhisi. Iyi dhipoziti ichavandudzwa nekutenderwa kwako. Iwe zvakare unotipa mvumo yekuchaja kiredhiti kadhi rako pafaira kuvhara mari yekutumira yemapakeji.
Panogona kunge paine mari dzakasiyana dzakasiyana dzakabatana neodha yako iyo yatinogona kukumbira iyo isina kunyorwa pane yedu webhusaiti. Iyi miripo inogona kunge iri yekuwedzera mari dzekutumira, gwaro kubvumidza, kubvunza mapakeji, mari yekuvandudza, kana imwe fizi kana zvinhu zvisingafanoonekwi zvinogona kuve zvine chekuita neodha yako kana kuwedzera kwezvedu zvinodiwa kubva muhomwe mari yatainge taziviswa tisati taburitsa. mitengo yakagadziridzwa. Idzo kero pane ino uye yakabatana mawebhusaiti anogona kana anogona kunge asiri echimanjemanje. Vamwe kana vamiriri vese vekambani vanoshanda kubva kunzvimbo dzekugara dziri kure kwete panzvimbo imwechete yepakati pebhizinesi. Mamwe makero akanyorwa uye mifananidzo, kusanganisira asi isina kuganhurirwa kumifananidzo yezvivakwa, inoratidzwa zvechinangwa chenhoroondo uye haimiriri mamiriro azvino. Ndokumbira uve nechokwadi chekutaurirana nemumiriri wekero yakakodzera usati watumira tsamba. Magweta Limited akambomisikidzwa munaJune wechisere mugore regumi nemapfumbamwe nematanhatu mudunhu reUS Nevada. Varidzi vemazuva ano vekambani vakaiwana musi waJanuary kana wechitatu muna gore zviuru zviviri nesere. Iyo kambani yanga isiri mumutsara wayo wazvino webhizimusi panguva yehupenyu hwayo. Zita rekambani rakachinja uye kambani yakamutsiridzwa, yakagadziridzwa uye kudzoreredzwa. Unobvuma kusavimba nezera reLL sechikonzero chekuitisa bhizinesi nesu. Chibvumirano ichi chose chinokanganisa zvese zviripo uye neramangwana zviitiko pakati pemapato.
Unobvuma kuti isu tinogona kugadzirisa mamiriro nemamiriro echibvumirano ichi uye nekushandura masevhisi akapihwa pasi pechibvumirano ichi. Chero ipi yakadzokororwa yakadaro kana shanduko ichave inosunga uye inoshanda nekukasira pakutumira iyo yakavandudzwa vhezheni. Chibvumirano kana shanduko kune sevhisi (s) pane yedu webhusaiti, kana pane ziviso kwauri neemail kana yakajairwa tsamba. Unobvuma kuongorora webhusaiti yedu, kusanganisira Chibvumirano ichi, nguva nenguva kuti uzive kumwe kudzoreredzwa kwakadai. Unobvuma kuti, nekuenderera mberi nekushandisa maSevhisi edu zvichitevera chiziviso chekuvandudzwa kwechibvumirano ichi kana shanduko mumasevhisi, iwe unoteerera nekumwe kudzoreredzwa kana shanduko.
KUSVIRWA KWEKUDA KWEMARI
LL uye vanhu vanobatanidzwa vanosanganisira, asi vasina kuganhurirwa kune vanogovanisa, maofficial, madhairekitori, vashandi, makondirakiti, subcontractors vanogona kunge vaine chido chemari kana kugamuchira mubhadharo kubva kune iwo mapato ayo LL anokuendesa kwauri, kusanganisira asi kwete kugumira kune, masangano emari, matirastii. , vamiririri vakanyoreswa, mafemu ekugadzira kambani, vatengesi account processors nevamwe. LL inogona kugamuchira makomisheni kubva kana kugamuchira dzimwe nzira dzekubhadhara kubva kumasangano emari, kusanganisira, asi kwete kugumira kumabhangi, mafemu ebrokerage, dzimba dzekudyara uye mamaneja emari nekuda kwebhizinesi ravanoita newe. Unobvuma uye unobvuma gadziriro dzakadaro uye unobvuma kuti izvi zvanyatsoziviswa kwauri.
Unobvuma kuti mutoro wedu wese, nemushonga wako wega, zvine chekuita neese maSevhisi (s) akapihwa pasi pechibvumirano ichi uye chero kutyorwa kwechibvumirano ichi zvinongogumira pamari yawakabhadhara seSevhisi. LL haizovi nemhosva kune chero yakanangana, isina kunanga, inongoitika, yakakosha kana yakanakisa kukuvara kunokonzerwa nekushandisa kana kutadza kushandisa chero maSevhisi kana pamutengo wekutenga kweanotsiva masevhisi. Nekuti mamwe matunhu, matunhu kana nyika hazvitenderi kubvisirwa kana kuremerwa kwechikwereti chekukuvara kwakakomba kana kwakangoitika, mumatunhu akadaro, matunhu kana nyika, mutoro wedu unogumira padanho rinotenderwa nemutemo. Kamwe kunyoreswa kwemazita emakambani kunoitwa, iwo haasi-anokwanisa kudzima uye haadzoreke. Usati waendesa odha yako, kaviri-tarisa chiperengo nekurongeka kwezita rako remakambani.
LL inoregedza chero kurasikirwa kwese kana chikwereti zvichibva, asi zvisingagumiri ku: (1) kurasikirwa kana chikwereti zvichikonzerwa nekunonoka kwekuwana kana kukanganiswa kwekuwana; (2) kurasikirwa kana chikwereti chinokonzerwa nedatha isiri-kuendesa kana data kutadza-kuendesa; (3) kurasikirwa kana chikwereti chinokonzerwa nezviito zvaMwari; (4) kurasikirwa kana mutoro unokonzerwa nezvikanganiso, kusiiwa, kana zvisirizvo mune chero ruzivo rwese rwunopihwa pasi pechibvumirano ichi.
Unobvuma kuti isu hatizovi nemhosva yekurasikirwa kwekunyoreswa uye kushandiswa kwezita rekambani rakanyoreswa, kana kukanganisa bhizinesi, kana chero zvisina kunangana, zvakasarudzika, zvine njodzi, kana zvinokanganisa zvinokuvadza zvemhando ipi neipi (kusanganisira purofiti yakarasika) zvisinei nemhando chiito kungave muchibvumirano, kutambudza (kusanganisira kuregeredza), kana neimwe nzira, kunyangwe tikapihwa zano nezve mukana wekukuvara kwakadai.
Unobvuma kusunungura, kubhadhara, uye kutibata isu, makondirakiti edu, vamiririri, vashandi, maofficial, madhairekitori, varidzi uye vanobatana navo vasina mhosva kubva pazvikwereti zvese, zvichemo uye mari, kusanganisira muripo wemagweta, wevatatu mapato ane chekuita kana kubuda pasi peChibvumirano ichi, Masevhisi anopihwa pazasi kana kushandisa kwako maSevhisi, kusanganisira pasina kuganhurirwa kutyorwa newe kune chero pfuma yeruzivo kana imwe kodzero yemunhu chero upi zvake kana sangano, kana kubva mukutyorwa kweimwe yemitemo yedu yekushandisa kana mutemo une chekuita nesevhisi (s) yakapihwa. . Kana LL ikatyisidzirwa nedare nemumwe munhu, tinogona kutsvaga vimbiso yakanyorwa kubva kwauri maererano nevimbiso yako yekuti utiregerere. Kutadza kwako kupa zvivimbiso izvi kunganzi kutyora Chibvumirano chako. Iwe unobvuma pasina zvisungo kuti hausi kuzoshambadzira, kurodha kana kuita pachena, chero nzira, chero nhema, dzinotsausa, hunyengeri, huipi uye / kana hunyengeri hwakanyorwa kana nemuromo zvinyorwa, zvingave zvemagetsi, pa-line, kuburikidza neinternet, kuburikidza nemawebhusaiti, kuburikidza nesocial media, kana neimwe nzira, maererano nezvigadzirwa zvedu uye/kana masevhisi uye/kana faira chero chipi zvacho chenhema, chinotsausa, chitsotsi, chine hutsinye uye/kana chichemo chinonyengera nechero agency, munhu uye/kana sangano maererano nezvigadzirwa zvedu uye/kana masevhisi.
Iwe zvakare unobvuma kutipa mukana une musoro wekugadzirisa chero chichemo uye kubvuma kutora chikamu mukuyananisa muFort Lauderdale, Broward County, Florida. Kana iwe ukatadza kutevedzera aya maratidziro nemamiriro echibvumirano chedu chekupa zvigadzirwa uye/kana masevhisi, unogona kunge uri pasi peCity Lawsuit muBroward County yeDefamation yeBusiness Reputation kana neimwe nzira. Nzvimbo yekuyananisa uye kukwidzana, kana iripo, iBroward County, Florida, uye mapato ese ari maviri anobvumirana kugovera mutengo wekuyananisa. Izvi hazvireve nenzira ipi neipi kurambidza kana kudzora kugona kwemunhu ari bato kune fomu rekondirakiti kuita kukurukurirana kwakavharwa. Chinangwa chayo, pakati pezvimwe zvikonzero zvepamutemo, ndechekudzivirira kunyomba, kuchera, kushungurudza, kushungurudza, kunyadzisira, kunyadziswa, zvepabonde, kana kumwe kutaurirana kusina kukodzera maererano nedzinza, zvepabonde, zvepabonde, rudzi, kana humwe hunhu hwemukati; izvo zvisingaenderane nezvinhu kana masevhisi anopihwa kana kuwanikwa pane yedu webhusaiti webhusaiti kana peji rewebhu; kana kutaurirana kuri pachena kwenhema kana kurasisa.
Unobvuma kuti kukundikana kutevedzera chero kupi kupi kwechibvumirano ichi kunogona kutariswa nesu sekutyora zvinhu uye kuti isu tinogona kupa ziviso yakanyorwa, ichitsanangura kutyora kwacho, kwauri. Chero kuputswa newe hakufanirwe kutorwa sekuregererwa nekuda kwekuti isu hatina kuita pakutanga kupindura izvo, kana kumwe kutyora newe.
LL inotsvaga kupa mitengo yakanaka uye inokwikwidza. LL inochengetera kodzero yekushandura chimiro chayo chemitengo chero nguva pasina chiziviso. Semuenzaniso, imwe chiyero inogona kutaurwa pakuvandudzwa kwechimiro chebhizinesi kana kutengeserana kwekutanga kwapera, asi chiyero ichocho chinogona kuchinja mune ramangwana kana kuvandudzwa kuripo nekuda kwekuwedzera kusingatarisirwi kwemari yehurumende kana kubva muhomwe mari, kana kune zvimwe. zvikonzero. Zvinyorwa zvakaitwa neLL zvekuti tinosangana nazvo uye/kana kurova mitengo yevakwikwidzi zvinofanirwa kududzirwa sezvatinogara tichikunda mitengo yevakwikwidzi uye nekuchengetedza kodzero yekukunda mitengo yevakwikwidzi pane imwe sarudzo yeLL. LL haisungirwe kudzorera musiyano uripo pakati peLL nemitengo yemukwikwidzi mushure mekunge kutengesa kwapera.
Unobvuma kuti, nekunyoresa kana kuchengetedza zita rako rakasarudzika remakambani, kunyoreswa kwakadai kana kupihwa nzvimbo hakupi hutachiona kubva pakuramba kunyoreswa, kuchengetedzwa, kana kushandiswa kwezita rekambani. Uye zvakare, haungavimbe nenyaya yekuti sangano rako rakaumbwa, uye isu hatifanirwe kuodha makadhi ebhizinesi, tsamba yemusoro, kana kupinza zvimwe zvinodhura zvine zita rako rekambani rakatemwa kusvika PASHURE pekunge wagashira magwaro ekutanga, nyika, purovhinzi kana hurumende yemubatanidzwa. . (Dzimwe nyika, matunhu kana nyika dzinoburitsa "Chitupa" chekubatanidzwa, semuenzaniso).
Unobvumirana uye unobvumidza kuti ruzivo urwo iwe rwunotipa kwatiri kunyoresa kana kuchengetedza yako bhizinesi zita riri, kune kugona kwako ruzivo nekutenda, rakarurama uye rakazara, uye kuti chero ramangwana shanduko kune urwu ruzivo rwuchapihwa kwatiri nenguva maitiro maererano nemaitiro ekushandurwa munzvimbo iyoyo panguva iyoyo. Kana yako odha yakaiswa kuburikidza nemumiriri, iye kana iye achaita kuyedza kwakabatana kunyora chokwadi chakanangana nezvezita rako rakasarudzwa rekambani, zita rako, kero uye rumwe ruzivo. Zvisinei, kukanganisa kana kududzirwa zvisizvo kunoitika. Unobata LL isingakuvadzi nekuda kwekukanganisa kwakadaro kana kududzirwa zvisizvo. Sarudzo yakanakisa ndeyekuti iwe upe ruzivo rwakanyorwa kuburikidza neemail kana imwe nzira yemagetsi yekubatsira inishuwarenzi yakakura kwazvo. Unobvuma kuti kushandisa kwako maSevhisi kungori panjodzi yako wega. Unobvuma kuti seSevhisi (s) idzi dzinopihwa pane "sezvazviri," "sezviripo" hwaro. Isu tinoratidzira pachena zvese zvivimbiso zverudzi rupi zvarwo, zvingave zviri pachena kana zvinorehwa, kusanganisira asi zvisingagumiri kune zvirevo zvekutengesa, kugwinya kwechimwe chinangwa uye kusiri kukanganisa. Isu hatipe garandi yekuti maSevhisi achazadzisa zvaunoda, kana kuti maSevhisi anenge ari panguva yakakodzera, akachengeteka, kana kukanganisa pasina; uye hatiite chero warandi yemhedzisiro inogona kuwanikwa kubva mukushandiswa kweMasevhisi kana nezvechokwadi kana kuvimbika kwechero ruzivo rwunowanikwa.
Isu, mukufunga kwedu chete, tinochengetera kodzero yekuramba kunyoresa kana kuchengetedza yako yakasarudzwa zita rekambani. Kana tikaramba kunyoresa kana kuchengetedza zita rako rekambani, tinobvuma kudzorera mari yako (s) inoshanda. Unobvuma kuti hatizovi nemhosva kwauri yekurasikirwa kana kukuvara kunogona kukonzerwa nekuramba kwedu kunyoresa zita rako rekambani.
Misoro yechikamu iri muchibvumirano ichi ndeyezvinangwa chete uye haizokanganisa zvinoreva kana kududzirwa kwechibvumirano ichi.
Kana zvikaitika kuti chero zvipi zvacho zvechibvumirano ichi zvikaonekwa kuti hazvimanikidzike, zvisungo izvi zvichaganhurirwa kana kubviswa kusvika padanho rakakodzera kuitira kuti Chibvumirano chingangoramba chakashanda zvizere.
Unobvuma kuti Chibvumirano ichi chakaenzana nechibvumirano chakazara uye chakasarudzika pakati pako nesu maererano neMasevhisi edu. Chibvumirano ichi chinodarika chero zvibvumirano zvisati zvaitika uye kunzwisisana, kungave kwakagadzwa netsika, maitiro, mutemo kana zvakatangira.
Chibvumirano ichi chakapinda mudunhu reUSA kuFlorida uye chinozotorwa maererano nemitemo yeFlorida, yakasarudzika nesarudzo yemitemo yemitemo. Bato rega rega muchibvumirano ichi rinoendesa kumatunhu akasarudzika eHurumende neFederal Courts vane hutongi mudunhu reBroward mudunhu reFlorida, uye vanoregedza chero nzvimbo yekutonga, nzvimbo, kana inopokana nhandare kumatare akadaro. Mune chero chiito chekusimbisa Chibvumirano ichi, bato rinenge riripo rinenge riine kodzero yemitero inonzwisisika yedare uye mari yegweta.
Chibvumirano ichi chinobata chibvumirano chose pakati pako neLL uye chinotorera chero chibvumirano chekutanga, chingave chemuromo kana chakanyorwa, pakati pako neLL.
-Ndinokutendai nekusarudza maLawyers Limited uye nemakwenzi edu akabatana sebasa renyu rekunyora.
Ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu nemibvunzo kana zvinonetsa zvaungave nazvo.
Pompano Gungwa, FL 33064
Kusabhadharwa: + 1-888-234-4949
Kutungamira / Int'l: + 1-661-310-2930
Zvemagetsi kuonana: Zadza fomu rekubvunza pane ino peji
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa muna Ndira 14, 2022